नीति न निरन्तरता, कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धि ? - Jhilko
नीति न निरन्तरता, कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धि ?
विश्वको आर्थिक विकासलाई नियाल्दा कुनै न कुनै रुपमा नीतिगत विषय महत्वपूर्ण हुने गर्छ । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशले पनि नीतिगत सुधार र अर्थप्रणालीमा विशेष ध्यान दिएका कारण नै आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मारेको देखिन्छ । देशको राजनीतिक अन्य सामाजिक स्थायित्वलाई कायम गर्न आर्थिक विकास मुख्य बन्छ । उदाहरणका लागि चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले आर्थिक विकासका लागि नीति एवम् आर्थिक प्रणालीमा गरेको आर्थिक सुधारका कारण सफल भएका हुन् । सामाजिक सुधारसहित अर्थतन्त्रलाई सँगै अगाडि बढाएका करण विश्वकै शक्तिशाली देश बन्न सफल भएका हुन् ।
उनीहरुले संस्कृतिलाई उत्पादन र उत्पादनलाई व्यापारमा जोडेको देखिन्छ । व्यापारबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई देशको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा लगाएको देखिन्छ । उनीहरुसँग आर्थिक विकासमा गहिरो प्रतिवद्धता देखिन्छ । राजनीतिक कारणले उनीहरुको अर्थतन्त्रमा कुनै नोक्सानी पुगेको जस्तो देखिँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दशकौं लगाएर ल्याएको परिवर्तनलाई जोगाउन सक्ने अर्थतन्त्र पनि विकास गर्न सकिएको छैन । आर्थिक दुुर्वलताका कारण कयौं राजनीतिक उपलब्धिलाई स्खलित भएर गएका छन् । उपलब्धि खोसिएका छन् । देशमा कम्युनिष्टहरु सरकारमा जान थालेको ३० वर्ष भयो तर पनि कुनै आर्थिक जग बस्न सकेको देखिँदैन । अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट नेतृत्वको शक्तिशाली छ । यसले पनि आर्थिक जग बसाउने छाँट देखिएको छैन । दलाल पुँजीपतिको चंगुलमा फसेका कारण पनि अर्थतन्त्रले सही दिशा पक्रन नसकेको गुनासो सुनिदै आएको छ ।
नेपालले विश्वको आर्थिक विकासबाट पाठ सिकेर देशलाई अगाडि बढाउने नीति अबलम्बन गर्न सक्नुपर्ने हो । उदाहरणका लागि केही देशको आर्थिक विकासका मुख्य परिवर्तनलाई यहाँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले एकै पुस्तामा विश्वको विकसित राष्ट्रको रुपमा उदाउन सफल भएको छ भने चीनको आर्थिक परिवर्तनले विश्वलाई नै चकित तुल्याएको छ ।
एकै पुस्तामा विकसित मुलुक
विगत ६० वर्षको इतिहासमा दक्षिण कोरिया ठूलो आर्थिक परिवर्तन गरेको हो । यो देशले १९६० को दशकमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुरु गरेको थियो । यो सन् २०१६ मा आएर विश्वकै कूूल ग्राहस्थ उत्पादनको दृष्टिले विश्वकै ११ औं ठूलो देशको रुपमा विकास भयो । एकै पुस्तामा यत्तिको आर्थिक छलाङमा मार्ने देश यो नै हो ।
यसको आर्थिक वृद्धिको रहस्य उसले गरेको नीतिगत रुपमा संरचनात्मक परिवर्तन नै हो । विश्व बजारलाई खुल्ला हृदयले स्वीकारेकाले पनि हो । उसले निर्यात उन्मुख नीतिका कारण दक्षिण कोरियाले मुख्य क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेको हो । अहिले कोरिया विश्वकै निर्यात गर्ने मुलुकमध्ये १० औं स्थानमा पर्छ । सन् १९९५ मा उसको कूूल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यातको २५.९ प्रतिशतबाट सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा ५६.३ प्रतिशतमा पु¥याएको छ ।
यहाँ मुख्य गरी व्यापारिक वातावरणमा उसले उल्लेख सुधार गरेको र आविश्कार र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र औद्योगीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले नै हो । डुइङ बिजनेसका दृष्टिले सन् २०१८ मा यो देश ४ नं मा रहेको छ । जबकि अमेरिका ६ नं मा पर्छ ।
जापानी जादूमय ब्राण्ड
जापानले आर्थिक विकासका लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ । जनतामा विकास र मेहनत गर्ने बानी बसालेर उसले विकास गरेको देखिन्छ । जापानले नीतिगत रुपमा ठूलो परिवर्तन गरेर आर्थिक संस्कार सिकाएको छ । उसले देशको आर्थिक विकासका लागि उच्च शिक्षा र दक्ष व्यक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिँदै विश्वलाई जादू देखाएको छ । नयाँ प्रविधिको खोजी र त्यसका लागि कडा मेहनत गर्ने बतावरण सिर्जना गरेको हो । त्यसले गर्दा आजको जापान भएको हो । उसले पनि उत्पादनमा र औद्योगिकीकरणलाई विशेष ध्यान दिएको छ । नीतिगत रुपमा ठूलो परिवर्तन गरेर स्वदेशी उद्योगी तथा व्यापारीका लागि अवसर सिर्जना गर्न जापानले कुनै कसर बाँकी राखेको पाइदैन । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोस्रो युद्धको मार खेपेको जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्नो आफ्नो पूरै शक्ति अनुसन्धान र विकासमा लागि खर्चेको देखिन्छ ।
यसले गुणस्तरीय उत्पादनलाई विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ । १९५५ कृषिमा काम गर्ने त्यहाँका जनता ४० प्रतिशत जनता कृषि श्रमिक थिए । १९७० मा आइपुग्दा त्यो संख्या घटेर १७ प्रतिशत कायम भयो । यही सबै विश्वको जीडीपीका अनुसार विश्वकै तेस्रो ठूलो देश भइसकेको थियो । सन् १९९० मा ७.२ प्रतिशत र अहिले ५ प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् । जापानले आफ्नो काम गर्ने तरिका र प्रविधिमा आधारित विकासलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । उसको अर्थतन्त्र उत्पादनबाट पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको लगानी र उत्पादन क्षेत्रको नीतिमा समयसापेक्ष बनाउँदै गएकाले जापानको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आइ विकसित राष्ट्रका रुपमा अगाडि बढेको हो । अहिले विश्वकै लागि जापानीज ब्रान्ड पुगेको हो ।
चीनको आर्थिक चमत्कार
चीनले विकास नीतिमा ल्याएको परिवर्तनका कारण आज चीन विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनेको हो । सन् १९४९ देखि १९७६ सम्ममा अपनाइएका आर्थिक नीतिले चीनलाई विश्वको यो स्तरमा पु¥याएको हो । यस अवधिमा देशलाई स्थायित्व दिन त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्व जुन भूमिमा खेल्यो, त्यो चिनियाँ इतिहासमै स्वर्णिम रहेको छ । दशकौंसम्म युद्धमा धकेलिएको चीनले सन् १९४९ देखि १९५२ का धेरै सुधारका प्रयास गरेको थियो ।
त्यसलगतै चीनले पहिलो पञ्चवर्षीय नीति अवलम्बन गरेर माओ जेदुङले औद्योगिक र सामाजिक विकासमा विशेष जोड दिएका थिए । त्यसैगरी १९५८ देखि १९६० को महान छलाङलाई पनि नीतिगत सामाजिक सुधारको पाटोलाई ऐतिहासिक रुपमा हेरिन्छ । त्यसैगरी माओकै पालामा सन् १९६१ देखि १९६५ सम्मको कृषिमा ल्याइएको परिवर्तन र १९६६ देखि १९७६ सम्मको सांस्कृतिक क्रान्तिले देशको मुहार फेर्नका लागि जग बसालेको देखिन्छ ।
त्यसपछिका आर्थिक सुधारका प्रणालीहरु विकास गरेर देशलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा चीनले उद्योग, कृषि उत्पादन, ऊर्जा विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विश्वका लागि अत्यन्त ठूलो उदाहरण भएको छ । सन् १९८० पछि देङ स्याओ पिङले ल्याएको आर्थिक सुधारले चीनको आर्थिक सुधार नै ग¥यो । त्यहाँ उत्पादन वृद्धिमै विशेष जोड दिइएको थियो । त्यसका लागि उसले नीतिगत रुपमा ठूलो परिवर्तन गरेको देखिन्छ । कृषिलाई माथि उठाएर त्यसलाई नै औद्योगीकरणमा परिवर्तन गरको देखिन्छ ।
कोरिया, चीन, भारत र ब्राजिलको अर्थतन्त्रभन्दा उत्तर अमेरिकको अर्थतन्त्र अलि फरक छ । यी देशले उसको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त द्रूत गतिमा अगाडि बढाएको देखिन्छ भने अमेरिकाले सानो तर सय वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म एउटै गति लिएको देखिन्छ । उसका अर्थतन्त्र सय वर्षसम्म नियाल्ने हो भने औसतमा २ देखि ३ प्रतिशत भन्दा बढी छैन । तर, निरन्तर आर्थिक वृद्धिमै रहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा उसले आफ्नो नीतिलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लगेको छ । अर्थतन्त्रमा सामान्य समस्या आए पनि उसले तुरुन्त सुधार गरेर आफ्नो आर्थिक गतिलाई सही दिशमा राखेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध होस् वा अत्य कुनै आपतकालीन अवस्था त्यसमा पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सामान्य मन्दी आउँछ तर समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो अन्तर देखिँदैन । उसको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अंकमा परिवर्तन आउँदैन । विन्दुमा मात्र परिवर्तन आएको देखिन्छ । बरु उसको अर्थतन्त्रले विश्वका अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा भने ठूलो असर गर्ने गरेको छ । अमेरिकाले पनि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने नीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ । उसले अमेरिकी पुँजीलाई विश्वका जुनसुकै कुनामा लगेर भए पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने नीति लिएको छ । यसले गर्दा उसको अर्थतन्त्र बाह्य समस्या देखिए आन्तरिक र आन्तरिक रुपमा समस्या भए बाह्य लगानीमा पाटोलाई सुधार गरेर सन्तुलन मिलाएको छ ।
आखिर नीति नै हो मूल
अर्थतन्त्रमा उत्पादनमा जोड, कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित एवम् आधुनिकीकरण गरेका कारण नै अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो लिएको हो । यो नै उसको पनि चुरो विषय हो । नीतिगत सुधारकै कारण उसले विश्वमा आफ्नो आर्थिक हैकम जमाएको हो । तर नेपालमा के भइरहेको छ ? हामीले कुन बाटो अँगालेका छौं भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ । दुई तिहाईका अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको जग बसाउने गरी नीति ल्याउनै सकेनन् । सरकारका मन्त्रीहरुले पछिल्लो दुई वर्ष नीति निर्माणमै ध्यान दिनुु परेको भन्दै भाषण गर्दै आएका छन् । तर कस्तो नीति बनाइयो र यसले कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने विषयमा कसैले पनि आंकलन गरेको देखिएन ।
विकास कार्यका लागि पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार देखिएन । विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा वर्षेनी फ्रिज हुुने क्रम निरन्तर छ । सामान्य कर्मचारी समायोजनको पिरलोले मिलाउन सकिएको छैन । वैदेशिक लगानी अपेक्षित रुपमा ल्याउन सकिएको छैन । देशमा लगानी वातावरण बन्न सकेको छैन । डुइङ विजनेसमा हाम्रो देश ११० औं स्थानमा छ । मौद्रिक नीतिले बचत र लगानीबीचको व्याजदर फरकलाई निश्चित दिशा दिन सकेको छैन । बैंकको तरलता स्थिर छैन ।
नीति न निरन्तरता
बैदेशिक सहायतामा ऋणको भार थपिँदै गएको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ । नेपालमा भएको सार्वजनिक निजी लगानीले वर्षेनी श्रम बजारमा आउने जनसंख्यालाई रोजगार दिन नसकेका कारण बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । लगानी बढे अनुरुप रोजगारी सिर्जना भएको छैन वा सिर्जना भएको रोजगारीमा अरु नै कोही कार्यरत छन्, अन्योल छ । यसले के देखाउँछ भने देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो देशमा न जापानको जस्तो जादु चल्ने भो न त चीनको चमत्कार । यहाँ न अमेरिकाको जस्तो निरन्तरता नै छ, न यहाँ कोरियाको जस्तो विकास नै । यहाँ कुनै पनि नीतिले काम गर्ने देखिएन । अनि कसरी हुन्छ आर्थिक समृद्धि ? नारा लगाएर आउने हो र समृद्धि ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट
कानुन बनाउने प्रक्रियामा जनसहभागीताको अभाव
मोदी सरकारले भारतीय रेलवे नीजी क्षेत्रलाई बेच्ने योजना बनाउँदै
एमसिसी पारित गर्नुपर्छ : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात प्रधानमन्त्रीको अवधि पार गर्दै आएको मिलेनियम...
कुहिएको चामल, दाल वितरण गरेको अभियोगमा कलैयाका मेयर राजेश...
उनले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्नलाई राहतमा कुहिएको चामल, दाललगायतका उपभोग्य...
सरकारले जारी गर्ने शेयरको क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रममा समेटिएका...
मैंले नै ललिता निवासको जग्गा लिएजस्तो गरेर बद्नाम गर्न...
‘ललिता निवास पनि बालुवाटारमै छ, मेरो निवास पनि त्यैँ छ, त्यसैले बालुवाटारको जग्गा...